Isahluko 23 | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Kubo bonke abafowethu nodadewethu abalizwile iphimbo Lami: Nizwe iphimbo lokwahlulela Kwami okunzima futhi nibekezelele ukuhlupheka okwedlulele. Nokho, kufanele nazi ukuthi ngemuva kwephimbo Lami eliqinile kufihlwe izinhloso Zami! Ngiyaniqondisa ukuze nisindiswe. Kufanele nazi ukuthi ngenxa yamadodana Ami athandekayo, ngizoniqondisa futhi nginithene nginiphelelise masinyane. Inhliziyo Yami ilangazelela kakhulu, kodwa aniyiqondi inhliziyo Yami futhi anenzi ngokwezwi Lami. Namuhla amazwi Ami eza phezu kwenu anenze ukuba nibone ngempela ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu onothando kanti nonke niluzwile uthando oluqotho lukaNkulunkulu. Nokho, kusenedlanzana labantu abazenzisayo futhi uma bebona usizi lwabanye abantu nabo babe nezinyembezi emehlweni abo. Kukhona abanye—ngaphandle—ababonakala sengathi bakweleta uNkulunkulu futhi babonakala bezisola, kodwa ngaphakathi, abamqondi kahle uNkulunkulu futhi abaqinisekile Ngaye; kunalokho ukuthenga amehlo nje. Ngibenyanya kakhulu laba bantu! Noma nini, laba bantu bazosuswa edolobheni Lami. Inhloso Yami ukuthi ngifuna labo abangifuna ngokuzimisela, nalabo kuphela abangifuna ngenhliziyo yangempela bangithokozise—ngoba labo nakanjani ngizobaseka ngezandla Zami ngiqinisekise ukuthi abahlangabezani nezinhlekelele. Abantu abamfuna ngempela uNkulunkulu bazozimisela ukunikeza konke ukunakekela emthwalweni kaNkulunkulu futhi bacabangele inhliziyo kaNkulunkulu futhi benze intando Yami. Ngakho, kufanele ningene kokungokoqobo masinyane futhi namukele izwi Lami njengempilo yenu—lo umthwalo Wami omkhulu kakhulu. Uma wonke amabandla nabo bonke abangcwele bengena kokungokoqobo futhi bonke bakwazi ukuhlanganyela Nami ngokuqondile, babukane ubuso nobuso Nami, benze iqiniso nokulunga, kulapho kuphela lapho bezoba khona ngamadodana Ami athandekayo, engithokozayo ngawo. Ngizobeka zonke izibusiso ezinkulu kulaba bantu.
Okwedlule: Isahluko 22
Okulandelayo: Isahluko 24
Eqinisweni, umsebenzi owenziwa manje owokuthi abantu bafulathele uSathane, bafulathele ukhokho wabo omdala. Zonke izahlulelo ngezwi zihlose...
UNkulunkulu unguNkulunkulu ongokoqobo: Wonke umsebenzi Wakhe ungokoqobo, wonke amazwi awakhulumayo angokoqobo, futhi wonke amaqiniso...
Nahlukaniswa nodaka futhi nakunoma yisiphi isilinganiso, nakhethwa enhleseni, ningcolile futhi nizondwa uNkulunkulu. Nina...
Kumuntu kukhona izwi lokukholwa elingenasiqiniseko, nokho umuntu akazi ukuthi yini eyakha ukukholwa, ingasaphathwa eyokuthi kungani...